Akụkọ Bible: Jizọs Emee Ka Ụlọ Nsọ Dị Ọcha - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
N’EZIE, iwe ji Jizọs ebe a, ọ́ bụghị ya? Ị̀ ma ihe mere ezigbo iwe ji ewe ya? Ọ bụ n’ihi na ndị ikom ndị a, bụ́ ndị nọ n’ụlọ nsọ Chineke dị na Jeruselem, bụ ndị anyaukwu. Ha chọrọ inweta ego buru ibu n’aka ndị bịara ife Chineke n’ebe a.
Ị̀ na-ahụ ụmụ ehi na atụrụ na nduru niile ahụ? Ndị ikom ndị a na-ere anụmanụ ndị a kpọmkwem n’ime ụlọ nsọ ebe a. Ị̀ ma ihe kpatara ya? Ọ bụ n’ihi na anụmanụ na nnụnụ dị ndị Izrel mkpa iji chụọrọ Chineke àjà.
Iwu Chineke sịrị na ọ bụrụ na onye Izrel emee ihe ọjọọ, ọ ga-eji anụmanụ chụọrọ Chineke àjà. E nwekwara oge ndị ọzọ ụmụ Izrel na-achụ àjà. Ma olee ebe onye Izrel ga-enweta nnụnụ na anụmanụ ndị ọ ga-eji chụọrọ Chineke àjà?
Ụfọdụ ụmụ Izrel nwere nnụnụ na anụmanụ. Ha pụrụ iji ihe ndị a chụọ àjà. Ma, ọtụtụ ụmụ Izrel enweghị nnụnụ ma ọ bụ anụmanụ ọ bụla. Ndị ọzọ bi ebe dị nnọọ anya site na Jeruselem nke na ha apụghị isi n’ụlọ ha kpụrụ anụmanụ ha bịa n’ụlọ nsọ ahụ. N’ihi ya, ha na-abịa ebe a azụrụ anụmanụ na nnụnụ ndị ha chọrọ. Ma ndị ikom ndị a na-ana nnukwu ego. Ha na-aghọgbu ndị mmadụ. E wezụga nke ahụ, ha ekwesịghị ịnọ n’ime ụlọ nsọ Chineke na-ere ihe.
Nke a bụ ihe were Jizọs iwe. N’ihi ya, o kpuru tebụl ego ha ihu, wee wụsasịa ego ha. O jikwa ụdọ mere ụtarị, wee chụpụsịa anụmanụ niile ahụ n’ụlọ nsọ ahụ. O nyere ndị na-ere nduru iwu, sị: ‘Wepụnụ ha n’ebe a! Kwụsịnụ ime ka ụlọ Nna m bụrụ ebe a na-akpa nnukwu ego.’
Ụfọdụ n’ime ụmụazụ Jizọs so ya nọrọ n’ebe a n’ụlọ nsọ a dị na Jeruselem. O juru ha anya ịhụ ihe Jizọs na-eme. Mgbe ahụ ka ha chetara ebe e kwuru n’ime Bible banyere Ọkpara Chineke, sị: ‘Ịhụnanya o nwere maka ụlọ Chineke ga na-ere dị ka ọkụ.’
Ka Jizọs nọ n’ebe a maka Ememe Ngabiga na Jeruselem, ọ rụrụ ọtụtụ ọrụ ebube. N’ikpeazụ, Jizọs hapụrụ Judia wee malite ịlaghachi Galili. Mgbe ọ na-ala, o si n’ógbè Sameria gafee. Ka anyị hụ ihe mere n’ebe ahụ.
Jọn 2:13-25; 4:3, 4.
N’ihi gịnị ka e ji na-ere ụmụ anụmanụ n’ụlọ nsọ?
Gịnị were Jizọs iwe?
Dị ka ị na-ahụ na foto a, gịnị ka Jizọs mere, oleekwa iwu o nyere ndị ahụ na-ere nduru?
Mgbe ụmụazụ Jizọs hụrụ ihe ọ na-eme, gịnị ka nke ahụ chetaara ha?
Olee ógbè Jizọs si na ya gafee mgbe ọ na-alaghachi Galili?
Gụọ Jọn 2:13-25.
N’iburu n’uche iwe Jizọs wesara ndị na-agbanwe ego n’ụlọ nsọ, olee ụzọ e kwesịrị isi lee ire na ịzụ ihe n’Ụlọ Nzukọ Alaeze anya? (Jọn 2:15, 16; 1 Ndị Kọr. 10:24, 31-33)
Ebe ọ bụ na Iwu Chineke nyere ohere ka a na-azụ anụmanụ e ji achụ àjà na Jeruselem, gịnị mere iwe ji bịa Jizọs n’ihi ndị na-ere ahịa n’ụlọ nsọ?
Gụọ akụkọ a na Baịbụl ma chọpụta ihe anọ a na-esetaghị na foto a.